Shaandheynta Kaasaska Hoose ee Awoodda Sare ee Iibka | Wariyaha FM-ta Awoodda Sare | Gudbiyaha FM ee Awood Sare
10kW Shaandheeyaha Baasa Hoose ee Iibka Iibso Shaandheeyaha Baasa Hoose ee Xarunta Raadiyaha
FMUSER 10kW FM filter Pass Low si fiican ugu shaqeeya:
FMUSER waxay bixisaa filtarrada harmonic sida 10kW FM filtar hooseeya Heerarka awoodda gudbinta ilaa 10 kW. Naqshad gaar ah ayaa bixisa 45 dB ama diidmo ka weyn laga bilaabo labaad ilaa tobnaad harmonic iyo wixii ka baxsan. Tani waxay soo saartaa filtarrada leh dhererka guud ee 30% ilaa 50% ka gaaban filtarrada harmonic FM ee caadiga ah.
Nasiib wanaag, FMUSER 10kW FM filtar hooseeya waa mid ka mid ah nidaamyada shaandhaynta nidaamka RF ugu fiican ee band soo noqnoqda FM. Si loo yareeyo saameynta ay keenaan is-waafajinta iyo qiiqa wasakhaysan, FMUSER waxay halkan ku soo bandhigaysaa mid ka mid ah shaandhaynta is-waafajinta ee aan ku faano 10kW RF filter kaarka hoose ee raadiyaha FM.
Haddii aadan rabin in kuwa is-waafajinta aan la rabin ay ku dhacaan xargaha soo noqnoqda ee aan khusayn adiga oo ay keento faragelin culus (waxaa laga yaabaa inaad hesho warqado badan oo cabasho ah oo dhib badan waxaana lagu ciqaabi karaa wakaaladaha sharciyeynta qaarkood), tusaale ahaan, inta jeer ee kanaalada TV-ga ama idaacadaha kale. Isticmaalka FMUSER 10kW RF filtar hoose oo hooseeya waa habka ugu wanaagsan ee lagugu caawin karo inaad ka xoroobato warqadaha ashtakada ee dhibsada.
Muuqaalka ugu weyn ee tan Awood sare filtar hoose oo hoose waa ay awoodda attenuation harmonic - marka loo eego xogta tijaabada ah ee lagu kalsoonaan karo ee kooxda tijaabada ee FMUSER, feejignaanta labaad ee is-waafajinta iyo is-waafajinta sare ee tan 10kW shaandhada hoose ee RF Waxay gaadheen siday u kala horreeyaan ≥ 35 dB iyo ≥ 60 dB, taas oo ah awood shaandhayn xoog leh oo isku-dhafan ee xarunta raadiyaha.
The luminta gelinta hoose ee FMUSER 10kW FM filtar hooseeya Waxay ka dhigaysaa mid ku habboon heerarka korantada ilaa 10000 watts, taas oo macnaheedu yahay in shaandhada RF-gan ee cajiibka ah, aad awooddo inaad isku darto adoo isticmaalaya noocyo kala duwan oo raadiyeyaal ah oo awoodo kala duwan ku leh xarunta raadiyaha, dhagaystayaashuna waxay heli karaan barnaamijyada raadiyaha tayada ugu sareysa iyo harmonics aad u hooseeya! Xidhiidhiyaha: 3 1/8 "Awood gelinta ugu badan 10kw
Shaandhooyinka 10kW Low Pass ee iibka ah, oo lagu dhex dhisay nidaam isku xidhid fudud, ayaa si gaar ah loogu dhisay Xarunta Raadiyaha FM. Iyadoo la tixgelinayo waayo-aragnimada isticmaale ee ugu fiican, Nidaamka shaandheynta wuxuu sahlayaa is-dhexgalka fudud ee gudbiyaasha FM.
Si caalami ah, waxaan jeclaan lahayn inaan ka caawino idaacadaha idaacadaha adduunka oo dhan si ay u go'doomiyaan gudbiyaasha FM-yada ee dhow, waxaan ogaanay in qaar ka mid ah ay muujinayaan xiisaha weyn ee isku dhafka FM-yada badan ee hal anteeno sayid ah, kuwa kale waxay jeclaan lahaayeen inay yeeshaan codsiyo gaar ah. gudbiyaashooda badan ee saldhigyadooda. 10kW FM filtar hooseeya, tusaale ahaan, waa mid ka mid ah iibkeena ugu wanaagsan filtarrada harmonics FM loo isticmaalo isku dhafka idaacadaha FM-ta oo gaaraya ilaa 10kW, waxaa laga yaabaa inaad ku aragto ninkan weyn idaacadaha waaweyn ee FM-ka qaarkood.
Sida aan kor ku soo sheegnay, waxaan nahay kuwa ugu fiican soosaarayaasha qalabka idaacadaha aagga caalamiga ah, ka sokow 10kW shaandhada hoose ee RF, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa kuwa kale filtarrada RF-iibka sare nuxurka soo socda. Waa hagaag, tayada wanaagsan iyo kharashka miisaaniyada sida had iyo jeer.
Habaynta iyo naqshadaynta shaandhada ayaa ka tarjumaysa hal-abuurka soo saaraha qalabka baahinta iyo ku-dhaqanka qalabka baahinta. Shaandheeyaha RF harmonics-ka ugu fiican waa inuu lahaadaa sifooyinka qiimaha miisaaniyada, nolosha adeeg dheer. FMUSER 10kW filtarrada hoose ee FM waxay ku dhacaan adeegsi fudud oo qiimo jaban hawl wadeenada idaacadaha
10kW FM Shaandhiyaha Gudbo Hoose x 1PCS
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato 10kW FM Filter Low Pass
Tusmada Korontada ee FMUSER 10kW Shaandheynta Gudub Hoose (Tixraac Kaliya)
Qaybta Xigta waa Tusmada Korontada ee FMUSER 10kW Shaandheynta Gudub Hoose | Skip
Geez, waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato! Si kastaba ha noqotee, hawl wadeen raadiye ahaan, runtii waxaad taqaanaa in ka badan FMUSER, laakiin halkan, si aad u ilaaliso oo aad u hagaajiso qalabkaaga idaacadaha, FMUSER wali waxay u baahan tahay inay kuu soo bandhigto saddex talo oo adiga ah, ka dib markaad iibsato shaandhadan 10kW FM hooseeya , saddex shay oo aad u baahan tahay inaad ogaato: hawlgalka, rakibidda, iyo TV-ga cable.
Shaandheeyaha waa laba jiho taasoo la micno ah in lagu rakibi karo labada dhinac. Moodeelka shaandhada gudbiyaha ee 10kW FM A wuxuu muujinayaa hoos u dhac ku yimaadda soo noqnoqoshada ka sarreeya 140 MHz sida ku cad qalooca jawaabta hoose.
OGEYSIIS: Digniinta gelinta ee shaandhada 10kW waa in aanay ka badan 10000 watts. Isticmaalka awooda sare waxay si joogta ah u dhaawacaysaa shaandhada waxayna burinaysaa dammaanadda